Ndị na -ebubata ngwaahịa na ụlọ ọrụ | Ndị na -emepụta ngwaahịa China
1.Akwadoro na akpa akpa rọba nke 25Kg nke ọ bụla, 25MT kwa 20FCL. 2.A kwakọbara na akpa jumbo a kpara akpa nke ụgbụ 1250Kg nke ọ bụla, 25 MT kwa 20FCL. 3.Dị ka ihe onye ahịa chọrọ si dị. 1.Magnesium sulphate maka ọrụ ugbo Sọlfọ na magnesium nwere ike inye nri na -edozi ahụ maka ihe ọkụkụ nke ọ na -enye aka na -eto ihe ọkụkụ ma na -abawanye mmepụta, ọ na -enyekwa aka ịtọghe ala ma melite ogo ala. Ihe mgbaàmà nke enweghị “sọlfọ” na “magnesium”: 1) ọ nwere ike ...
Ugbu a nnukwu ihe mgbochi maka stevia bụ echiche ndị ahịa. Nsonaazụ gosiri na shuga stevia bụ ihe na-atọ ụtọ na-abụghị cariogenic.
Aha ngwaahịa Sorbic Acid CAS Nke 110-44-1 EINECS Nke 203-768-7 Ọdịdị agịga na-enweghị ụcha ma ọ bụ ntụ ntụ na-asọ n'efu, na-enwe ntakịrị njirimara isi nri ọkwa ọkwa MF C6-H8-O2 Ibu 25kg/akpa Shelf Life 2 afọ Asambodo HACCP, ISO, KOSHER, HALAL mbukota akpa 25kg Sorbic Acid nwere ike ịgbari na mmiri ma enwere ike iji ya dị ka ihe nchekwa. Enwere ike iji Sorbic acid dị ka ihe nri ma ọ bụ mgbakwunye nri na ndụ anyị kwa ụbọchị. Sorbic acid bụ ọkachasị u ...
Sucralose bụ ihe na-atọ ụtọ shuga na-enweghị kalori. Na European Union, a makwaara ya n'okpuru nọmba E (koodu mgbakwunye) E955. Sucralose dị ihe dị ka okpukpu narị isii dị ka sucrose (shuga tebụl), okpukpu abụọ karịa saccharin, yana okpukpu atọ dị ụtọ dị ka aspartame. N'adịghị ka aspartame, ọ kwụsiri ike n'okpuru okpomọkụ yana n'ọtụtụ ọnọdụ pH enwere ike iji ya mee achịcha ma ọ bụ na ngwaahịa chọrọ ogologo ndụ. Ihe ịga nke ọma azụmaahịa nke ngwaahịa dabere na sucralose ...
Trehalose, nke a makwaara dị ka mycose ma ọ bụ tremalose, bụ disaccharide sitere na alfa nke sitere na njikọ nke α, α-1,1-glucoside n'etiti nkeji α-glucose abụọ. Na 1832, HAL Wiggers chọpụtara trehalose na ergot rye, na na 1859 Marcellin Berthelot kewapụrụ ya na trehala manna, ihe ahịhịa na -eme, wee kpọọ ya trehalose. Enwere ike ịhazi ya site na nje, fungi, osisi, na anụmanụ ndị na -adịghị ahụ anya. Ọ na -etinye aka na anhydrobiosis - ikike nke ihe ọkụkụ na anụmanụ na -eguzogide ogologo ...
Aspartame ntụ ntụ
Aspartame Sweetener, Ụdị Arshine Aspartame
Ndị na -atọ ụtọ 100 Mesh Aspartame
Ndị na -atọ ụtọ 100 ~ 150 Mesh Aspartame
Ndị na -atọ ụtọ 20 ~ 60 Mesh Aspartame
Ndị na -atọ ụtọ 60 ~ 100 Mesh Aspartame
Powder Sweeteners, 200 Mesh Aspartame
Xylitol bụ ihe na-atọ ụtọ 5-carbon polyol sweetener. A na -ahụ ya na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ma ọ bụ ahụ mmadụ n'onwe ya na -emepụta ya. Ọ nwere ike ịmịkọrọ okpomọkụ mgbe etisasịchara ya na mmiri, yana ọrụ na -amị mmiri, yana afọ ọsịsa na -adịru nwa oge nwere ike ibute ya mgbe oke oke. Ngwaahịa ahụ nwekwara ike ịgwọ afọ ntachi. Xylitol bụ ihe kacha atọ ụtọ n'ime polyols niile. Ọ na-atọ ụtọ dị ka sucrose, enweghị ụtọ mgbe ọ bụla, ọ dịkwa mma maka ndị ọrịa mamịrị. Xylitol nwere kalori 40% karịa shuga na, maka nke a ...
ọnụ ahịa ihe CAS Nke 585-88-6 Aha ndị ọzọ Maltitol MF C12H24O11 EINECS Nke 209-567-0 FEMA Nke 3025 Ebe Mmalite China Ụdị Sweeteners Brand Aha Z & FSUNGOLD Model Number Food Grade Item Maltitol Powder/Solution/Syrup/Liquid Sweenener Aha ngwaahịa ngwaahịa ọkọnọ Maltitol Ọdịdị Nkwa ọcha ntụ ntụ ISO Grade Food Garde Ngwa Nri agbakwunyere agba ndụ ndụ ndụ afọ abụọ iji afọ eme ihe dị ụtọ 98.0% min (1) Dị ka nri na -arụ ọrụ, ọ nwere ike ...
Glucose crystalline, dị ka ọdịiche nke usoro nrụpụta nwere ike kewaa Dextrose Monohydrate na Dextrose Anhydrous. A na-ekewa crystalline dextrose monohydrate n'ime glucose ọkwa ọkwa, glucose na glucose ọkwa ọgwụ nri na-ejikarị na nhazi nri na ụlọ ọrụ akwụkwọ nri. Site na hydrogenation nke glucose monohydrate nwere ike mepụta sorbitol, ọgwụ na glucose monohydrate dị ka ọgwụ ọnụ bụ nke mbụ (inyeaka). Crystalline dextrose monohydrate cont ...
CAS Mba.: 149-32-6 Standard dị ka: GB26404-2011/ USP32/ EP 7.0/ FCCIV Mesh size: 14-30, 30-60, 18-60, 100mesh Erythritol, polyol (mmanya shuga), bụ ezigbo ihe na-atọ ụtọ nke na-atọ ụtọ nke dabara maka ụdị kalori na nri na-enweghị shuga. Ọ bụ akụkụ nke nri mmadụ ruo ọtụtụ puku afọ n'ihi ọnụnọ ya na mkpụrụ osisi na nri ndị ọzọ. Erythritol nwere nnabata nri dị elu, dị mma maka ndị nwere ọrịa shuga, ọ naghị akwalite ire ere ezé. Magburu onwe okpomọkụ absorp ...
1.Industrial Dextrosewaste mmiri ọgwụgwọ. 2.Dextroseis ejiri mee ihe dị ka ihe na -edozi ahụ maka ntụtụ (ntụtụ glucose); 3.Dextrose na ụlọ ọrụ nri, etinyere n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ shuga dị ugbu a. Dextrose bụ nri dị mkpa maka metabolism n'ime ahụ. Enwere ike iji ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ ozugbo na ụlọ ọrụ na -ebi akwụkwọ na agba dị ka onye na -ebelata ihe, na ụlọ ọrụ enyo na mmiri ọkụ gall plating usoro a na -ejikarị dị ka onye na -ebelata ihe. Nnyocha na -aga n'ihu ...